Global Voices teny Malagasy » Mampahafantatra ny Bilaogera Malaza Indrindra any Brunei · Global Voices teny Malagasy » Print
Mampahafantatra ny Bilaogera Malaza Indrindra any Brunei
Voadika ny 28 Jona 2011 20:25 GMT 1	 · Mpanoratra Zul-Fadly Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Broney, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Raha nankalaza ny faha 8 taona [namahanam-bolongana?] ny ilay bilaogera ao Brunei RanoAdidas  ny volana lasa teo, voatantara tsara tamin'ny fampahalalam-baovao lehibe izany hetsika izany. Marika tsy noho ny lazany amin'ny maha bilaogera azy ihany izany fa noho ny fahombiazany tamin'ny fampandrosoana ny valantserasera tao Brunei ihany koa.
Manaiky  ny lazan'ny bilaogera izay manana salan'isan'ny mpitsidika 5000 ka hatramin'ny 6000 ary mety hahatratra ny faratampony any amin'ny 20000 ka hatramin'ny 25000 ao anatin'ny volana ny Brunei Times
Maherin’ny enina arivo no manaraka an’i Ranoadidas  ao amin’ny twitter (@ranoadidas ) ary latsaky ny 200 ny tsy hahatrarany mpankafy ny facebookny  ho valo arivo.
Ny volana lasa teo, nankalaza ny faha 8 taonany  tamin’ny fomba manetriketrika ny lazan’ny bilaogera Brunei. Nanofa efitrano iray tao amin’ny Ivon-toerana Fivoriana Iraisampirenena izy ary nisy ny tranoeva napetraka ho an’ny vahiny sy ny mpanohana handray anjara amin’ny hetsika
Ranoadidas niaraka tamin'ireo tanora mpankafy
Nanomboka tamin’ny Alakamisy 26 Mey 2011 ny hetsika mandritra ny efatra andro, ary noravahana fampisehoana sy fifaninana izany. Nizara ny tsara, nizara fanomezana ary baolina ho an’ny ankizy sy ny olon-dehibe i M.Rano
Nisy ny teny fototra noforonina manokana tao amin’ny twitter #ran8adidas  izay misy ny sarin’ny fifaninana ho an’ny Instagram sy MyTubo 
Raha mahatsiaro Bilaogera Bruneiana izahay, dia mahatsiaro an’i Ranoadidas. Ary mamitaka ny tenanao ianao raha mahatsiaro zavatra hafa.
Bilaogera hafa ao an-toerana, Nonnie King  na fantatra amin’ny anarana hoe @kisich  ao amin’ny twitter, no nanoratra bilaogy momba ny famirapiratan’ny hetsika, ny Fifaninana mihinana sakafo , nokarakarain’ny magazay momba ny sakafo  ao an-toerana, @kapowburger  sy @kitarojapanese .
Afaka notanterahina ihany koa ny fandefasana mivantana ny hetsika amin’ny fanampian’ny zatovolahy ao amin’ny@CornerGeeks  izay nanampy  tamin’ny fanatontosana ny horonantsary mivantana amin’ny alalan’ny UStream .
Noporofoin’i Ranoadidas fa ny fanaovana bilaogy dia tsy loharano mety ahazoana vola ihany fa sehatra miaina manana heriny amin'ny fampahalalam-baovao ihany koa. Maro ireo tolona  nosedraina nandritra izay valo taona lasa izay saingy tsy very ny fanantenany mikasika ny herin’ny fanaovana bilaogy mba ho lasa fitaovana manan-danja hampandroso ny sosialy ao Brunei.
Ankoatra ny fampahafantarana ireo karazana hetsika notohanan'ny rafi-pitondrana miankina na ny tsy miankina, dia miditra amin'ny asa fanasoavana ihany koa izy rehefa misy fotoana. Vao avy niara-niasa tamin'ny bilaogera hafa malaza Reeda Malik  ao amin'ny anakbrunei.com.bn  koa izy ary nanao fanangonam-bola ho an'ny hetsika asa fanasoavana karakarain'ny HSBC.
Vao haingana koa tamin'ity taona ity no nahazo fanasana ny roa tamin'izy ireo hanatrika ny Fihaonamben'ny Bilaogera ASEAN andiany voalohany  ao Kuala Lumpur, Malaysia.
Marina tokoa, fankatahaka ho an'ny bilagera maro ao Brunei ny fahombiazan'i Ranoadidas.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/06/28/18865/
 mpankafy ny facebookny: https://www.facebook.com/ranaodidas
 8 taonany: http://bruneitimes.com.bn/happenings/2011/05/27/happy-anniversary-ran8adidas
 Fifaninana mihinana sakafo: http://kisich.blogspot.com/2011/05/food-eating-competition-ran8adidas.html
 hetsika asa fanasoavana : http://anakbrunei.com.bn/2011/06/05/walk-run-cycle-raises-107k/
 Fihaonamben'ny Bilaogera ASEAN andiany voalohany: http://www.ranoadidas.com/4434-asean-bloggers-part-ii-next-year